कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन नेपाल के गर्दैछ ? « LiveMandu
कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन नेपाल के गर्दैछ ?
८ आश्विन २०७७, बिहीबार २२:१९
आजको TOUGHtalk हाइलाइट्स
अमेरिकाबाट डाक्टर बिजय ढकाल जो कोरोनाभाइरसको जटिल परिक्षणहरु गर्ने अमेरिकास्थित ‘Sonic Reference Lab’ कोभिड-१९ टास्कफोर्समा साइन्टिफिक एडभाइजर ।
चिकित्सक, जनस्वास्थ्य विद तथा संक्रामक रोगका सोधकर्ता तथा पछिल्लो समय भ्याक्सिनको बिकासबारे चाँसो राखिराख्नुभएका डाक्टर किरणराज पाण्डे । डाक्टर किरणराज पाण्डेसँग Internal Medicine स्वास्थ्यसँग विशेष अनुसन्धानको अनुभव छ ।
फोक्सो तथा सघन उपचारमा विशेषज्ञता राख्नुहुने डाक्टर रक्षा पाण्डे । डाक्टर रक्षा पाण्डेसँग सिंगापुरस्थित ‘National University Hospital’ मा ७ वर्ष चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।
कोराना भारइस (कोभिड–१९) को संक्रमण शुरु भएको करिब नौ महिना भयो । यो अवधिमा संसारका करिब तीन करोड भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमति भएका छन भने करिब १० लाखको मृत्यू भइसकेको छ ।
संक्रमणको दर अहिले नेपालमा पनि बढेर गएको छ । झण्डै ७० हजार संक्रमति भइसकेका छन् भने मृत्यू हुनेको संख्या पाँच सय हाराहारीमा पुग्दैछ । यति छोटो अवधिमा संसारभर नै फैलिएको यो भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको ठुलो चुनौती अब हामी सामु पनि देखा पर्दैछ । हामी अझै पनि न त यसबाट बच्न व्यत्तिगत तहमै आवश्यक विशेष सावधानी अपनाउन सकिरहेका छौ न सरकारका तर्फ हुनु पर्ने भर पर्दो व्यवस्थापन नै ।
अनि यति नै बेला कैयौ देशका बैज्ञानिकहरु भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका छन् र सफलताको नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका छन् । धेरैजसो देशहरुले त आफ्ना नागरिकलाई बचाउन भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरुसंग प्रि–बुकिङ समेत गर्न थालिसकेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको विकास कहाँ कहाँ, कसरी भइरहेको छ ? यसको विकासका लागि अरु कति समय लाग्छ ? यसका जटिलताहरु के छन् ? भ्याक्सिन पत्ता लागेको अवस्थामा नेपालले छिटो आफ्नो मुलुकमा भित्राउन के के पहल गर्नुपर्छ ?
कि संसारभरका अन्य मुलुकहरु भ्याक्सिन बनेको अवस्थामा कसरी आफ्नो मुलुकमा ल्याउने र नागरिकहरुलाई बचाउने भनेर तदारुकता देखाइरहेको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरु के गरिरहेका छन् ? यसका साथै अहिले बढिरहेको संक्रमितको संख्या र मृत्युले के संकेत गर्छ । आगामी दिनमा हामीलाई कोरोना भाइरसले कसरी घेर्दैछ ?
यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि आजको संवादमा आज तीन जना डाक्टरहरु हुनुहुन्छ । अमेरिकाबाट डा. विजय ढकाल । उहाँ कोरोना भाइरसका कठिन टेस्टहरु गर्ने अमेरिकाको सोनिक रेफ्रेन्स ल्याबको कोभिड–१९ टास्कफोर्समा साइन्टिफिक एडभाइजरको रुपमा कार्यरत हुनुुहन्छ ।
त्यस्तै नेपालबाट जनस्वास्थ्यविद् समेत रहनु भएका संक्रामक रोगका सोधकर्ता र पछिल्लो समय यसको भ्याक्सिनको विकासबारे चासो राखिरहनुभएका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा किरणराज पाण्डे र फोक्सो तथा क्रिटिकल केयरमा विषेशज्ञता राख्नु हुने डा.रक्षा पाण्डे ।
TOUGHtalk को ताजा अंक हेर्नुहोस्ः
#Dil Bhusan Pathak
बुटवल । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा भएका विकास निर्माणलाई सिध्याउन खोजेको